Nekushandisa webhusaiti yedu uye nekuraira zvigadzirwa zvedu unobvumirana nemitemo inotevera
Iwe unofanirwa kuve pamusoro pemakore gumi nemasere
Pasina mamiriro ezvinhu zvigadzirwa zvedu zvinofanirwa kushandiswa mune chero miedzo yevanhu muUK pasina Hofisi Yekumba kana MHRA mvumo. Ivo havasi maInvestigational Medicinal Zvigadzirwa.
Yedu maSARMS zvigadzirwa zvinotengeswa zvine hungwaru nekuda kwekutsvaga chete.
Zvese zvigadzirwa zvakashambadzirwa, zvakatengeswa kana zvimwe zvakataurwa pane ino webhusaiti zviri TSVAKURUDZO YEMAHARA MABHUKU
GENERAL TERMS NEZVINOGONESESA ZVEKUSHANDISWA CHIBvumirano: VATengi vatengi VANOFANIRA kuve vangangoita 18 makore ekuzvitenga zvigadzirwa zvedu.
NDINODZIDZA VERENGA UYE WEDZIDZE ZVINOTEVERA ZVINOTEVEDZWA NEZVINOGONESESA ZVEKUSHANDISA CHIBvumirano CHISUNGO USATI WASHANDISA Iyi WEBHU SITITI NEMASHURE ANOBATSIRANA.
Nekushandisa ino webhusaiti, unobvumirana neMitemo neMamiriro Ekushandisa Chibvumirano. Kana iwe usingabvumirani, ndapota buda uye urege hanya neruzivo rwuri pano.
www.tichamary.co.uk inochengetera kodzero yekuchinja iyo Mitemo uye Mamiriro Ekushandisa Chibvumirano, izere kana chikamu, chero nguva pasina kukuzivisa kare. Saizvozvo, iwe unofanirwa kugara uchiongorora peji ino usati washandisa ino Webhu saiti uye kana masevhisi kuitira kuti uve nechokwadi chekuti iwe unonzwisisa mazwi ari pasi pekuti iwe unobvumidzwa kuwana.
Kushandisa kwako webhusaiti yedu kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira, mashandisiro ako webhusaiti ino anotongwa neMitemo neMamiriro Ekubvumirana Chibvumirano uye webhusaiti Chakavanzika Policy, inosanganisirwa pano neichi chirevo. Mukushandisa iyi webhusaiti, unorambidzwa kubva kugadzirisa, kugovera, kuendesa, kuberekazve, kutsikisa, kupa marezinesi, kuendesa kana kutengesa chero ruzivo, zvigadzirwa kana masevhisi akawanikwa kana kutariswa pawebhusaiti ino. Nekudaro, iwe unogona kuratidza, kurodha pasi kana kupurinda makopi akaomarara echinhu chero chipi zvacho chiri pane ino webhusaiti yako pachako, isiri-yekutengesa kushandiswa chero bedzi iwe usinga gadzirise zvirimo kana kudzima chero copyright, chiratidzo chekutengeserana kana chimwe chiziviso chepropeti. Chero kumwe kushandiswa kwemashoko ari pane ino webhusaiti kunorambidzwa pasina mvumo yedu yakanyorwa yakanyorwa.
Kushandiswa kweruzivo rwunopihwa ino webhusaiti, nepo zvichibatsira, haifanire kushandiswa sechinotsiva kuraira kweako wega chipangamazano. Ruzivo rwunowanikwa kubva kune ino webhusaiti harusi kuitirwa kuti ishandiswe kuongorora chero hutano mamiriro kana chirwere. Zvigadzirwa pane ino webhusaiti zvinotengeswa zvekutsvaga chete. www.tichamary.co.uk inochengetera kodzero yekugadzirisa chero zvisiri izvo kana typographical zvikanganiso mune ruzivo rwakatumirwa pane ino webhusaiti, uye haizove nemhosva yezvikanganiso zvakadaro. Ruzivo runogona kuchinjwa kana kuvandudzwa pasina chiziviso uye mitengo uye kuwanikwa kwezvinhu uye masevhisi anogona kuchinja pasina ziviso.
ASI KUPA Chero Ripi Zano.
Izvo zvirimo ndezve ruzivo rwezvinangwa chete uye hazvina kuitirwa kuti upe rairo yakanakira iwe, uye haifanire kuvimbwa nazvo mune izvo. Iwe haufanire kuita kana kuvimba nezviri mukati usingatsvage kuraira kwenyanzvi.
ZVINOGONESESWA ZVINOTENGESWA PAWEBHSITI IYI NDEZVINODZIDZISWA NEZVINODZIDZISWA.
Iwe unobvumirana kuripa uye kubata www.tichamary.co.uk, uye edu matavi, vanobatana navo, maofficial, madirector, vamiririri, vanobatana navo, vashandirwi nevashandi vasingakuvadzi kubva kune chero chirevo kana kudiwa, kusanganisira mari inokodzera yemagweta inoitwa nechero munhu wechitatu nekuda kwekubuda kana kushandisa kwako zvirimo pane ino webhusaiti. , kana chero zvemukati zvaunotumira, kutumira, kana kutumira kuburikidza newebsite ino, mashandisiro ako webhusaiti ino, kubatana kwako kune ino webhusaiti, kutyora kwako kweMitemo neMitemo yekushandisa Chibvumirano, kana kutyora kwako chero kodzero dzeumwe.
MABHUKU / SOFTWARE.
Zvinongedzo kubva kana kuenda kumawebhusaiti ari kunze kwewebhusaiti inoitirwa nyore chete. www.tichamary.co.uk haiongorore, haibvumire, haibvumire kana kudzora, uye haina mhosva kune chero masaiti akabatanidzwa kubva kana kune ino webhusaiti, zvirimo zveaya masaiti, mapato echitatu akanyorwa imomo, kana zvigadzirwa zvavo kana masevhisi. Kubatanidza kune chero imwe saiti kuri panjodzi yako chete uye www.tichamary.co.uk haizovi nemhosva kana kuva nemhosva yekukuvara maererano nekubatanidza. www.tichamary.co.uk uye inoregedza zvivimbiso zvese, inotaura uye inoreva nezvechokwadi, huchokwadi uye huchokwadi hwechero zvigadzirwa kana ruzivo rwunowanikwa pane iwo masayiti. Zvinongedzo kune zvinoteedzera software saiti ndezvekureruka chete uye www.tichamary.co.uk haina mutoro kana mutoro kune chero matambudziko kana mhedzisiro inosanganisirwa nekutora software. Kushandiswa kwechero software yakadzingwa inotongwa nemitemo yechibvumirano cherezinesi, kana chiripo, icho chinoperekedza kana kupihwa neiyo software.
KUWANIKWA KWENYAYA YEDU YENYU
Iyi webhusaiti inowanzo kuwanikwa kune vashandisi Makumi maviri nemana (24) maawa pazuva, Mazuva manomwe (7) mazuva pasvondo, Mazuva mazana matatu nemakumi matanhatu neshanu (365) mazuva pagore. Zvisinei, www.tichamary.co.uk inochengeta kodzero yekuita kuti webhusaiti yedu isawanikwe chero nguva, chero chikonzero, uye nechero kureba kwenguva. Nekushandisa ino webhusaiti unobvuma izvozvo www.tichamary.co.uk haizovi nemhosva yekukuvara chero kupi kunobva kana kune chekuita nekukanganisa kwakadai, kumiswa, kana kumiswa kwewebhusaiti uye / kana masevhisi kana zvigadzirwa zvirimo. Pakugamuchirwa kwematemu nemamiriro ekushandisa www.tichamary.co.uk inokupa mvumo yekutarisa zvirimo pawebhusaiti kungoshandisa iwe wega. Izvo zvinhu zviri pawebhusaiti zvinoitirwa chete vanhu vanobvunza nezvazvo www.tichamary.co.uk '' Zvigadzirwa kana masevhisi. Kana usiri kuwana iyo webhusaiti nekuda kwezvakadai, unogona ikozvino kushandisa webhusaiti. Ichokwadi, kushandiswa nevasiri vanhu kana vamiririri, magweta kana vamiririri vevasiri-vanhu zvinorambidzwa.
www.tichamary.co.uk kana kuunganidzwa kwedu uye / kana kushandisa chero ruzivo rwaunopa iwe uchishandisa kana kushanyira ino webhusaiti inotongwa ne www.tichamary.co.uk Yakavanzika Policy uye Mitemo uye Maitiro Ekushandisa Chibvumirano. Nekushandisa ino webhusaiti iwe unotipa isu kodzero dzirimo. Mukushandisa iyi webhusaiti iwe haugone kuisa, kugovera kana neimwe nzira kuburitsa pane ino webhusaiti chero ruzivo rungangotariswe sekushoreka, kusvibisa, kuhura, kutyisidzira, kushungurudza, zvisiri pamutemo, kupambwa kwekodzero dzevamwe kana zvimwe zvinopesana kana zvinogona kuita kana kukurudzira kutyorwa. chero mutemo. Kunze kweiyo yega yega-inozivikanwa ruzivo rwunounganidzwa kubva kwauri zvinoenderana neyakavanzika Policy, zvese zvataurwa, makomendi, mazano, mazano kana rumwe ruzivo rwunotaurwiswa inova yega pfuma ye www.tichamary.co.uk uye iwe unopa ku www.tichamary.co.uk rezinesi risingabhadharwe, risingaperi, risingachinjiki, pasirese, rezinesi risingasarudzwe kushandisa kana kubereka zvakafanana. www.tichamary.co.uk yakasununguka kuteedzera, kuburitsa pachena, kugovera kana kuongorora chero ruzivo rwakadai kune chero uye zvese zvinangwa uye hapana nzira inosungirwa kukubhadharira iwe kune chero ruzivo rwakadai.
www.tichamary.co.uk inopa zvirimo pane ino webhusaiti sevhisi kwauri, isu mutengi. Iyi webhusaiti haigone uye haina, iine ruzivo nezve ese maficha ezvigadzirwa zvakatengeswa. Inogona kunge isina ruzivo rwese rwunoshanda kune ako mamiriro ezvinhu kana kushandisa kwako zvigadzirwa zvakatengeswa. Izvo zvirimo zvewebsite ino, webhusaiti server inoita kuti iwanikwe, uye masevhisi uye zvigadzirwa www.tichamary.co.uk inopa pane ino webhusaiti, zvinopihwa pane "sezvazviri" uye "sezviripo" hwaro pasina garandi yerudzi rupi zvarwo, ingave inoratidzira, inorehwa kana zviri pamutemo. www.tichamary.co.uk anonyatsozivisa mutoro wekutadza kwehunyanzvi (kusanganisira Hardware kana kutadza kwesoftware), zvisina kukwana, zvakatsomwa kana kunonoka kufambiswa kwemakomputa, uye / kana zvisiri zvehunyanzvi, pamwe nekuwana kusingatenderwe kwekutumira kwevashandisi nevanhu vechitatu. Uyezve, www.tichamary.co.uk haimiriri kana kuvimbisa kuti hapana hutachiona kana zvimwe zvinosvibisa kana zvinoparadza zvichafambiswa, kana kuti hapana kukuvara kuchaitika kune yako komputa system. Iwe une wega mutoro wedziviriro yakakwana uye negadziriro yeparutivi yedata uye / kana zvishandiso uye kutora matanho ese ekuti utarise mavhairasi emakomputa kana zvimwe zvinokuvadza. Nekushandisa kwako saiti ino webhusaiti, unobvuma kuti mashandisiro akadaro ari panjodzi yako wega, kusanganisira mutoro wezvese zvinodhura zvine chekuita neesevhi inodiwa kana kugadziridzwa kwechero michina yaunoshandisa zvine chekuita newebhusaiti ino. Kuzere zvakakwana kusingatadziswe nemutemo unoshanda www.tichamary.co.uk, vanachipangamazano vavo vezvekurapa, vanopa rubatsiro, vanopa mazano, madhairekitori uye nevashandi vanozviramba uye vanosiya zvivimbiso zvese zvine chekuita nezvose zvirimo, zvinoratidza, zvinorehwa kana zviri pamutemo. Uku kusazvibata kunosanganisira, asi hakuganhurirwe, chero uye zvese garandi kana kushambadzira, kugwinya kwechimwe chinangwa, uye kusaputsa. www.tichamary.co.uk haipe kuti zvirimo zvive zvechokwadi, zvakakwana kana zvazvino. www.tichamary.co.uk haina mvumo yekuti webhusaiti ino ishande pasina kukanganisa, izvo zvikanganiso zvicharuramiswa kana kuti webhusaiti ino kana webhusaiti webhusaiti ichiita kuti iwanikwe haina mavhairasi kana zvimwe zvinokuvadza. Mutengo uye zviripo zvirimo, pamwe nezvimwewo zvirimo mune ino webhusaiti kana kuwanikwa ipapo zvichibva, zvinogona kuchinja pasina ziviso. unobvuma uye unobvumirana Usati washandisa chero chigadzirwa unofanirwa kusimbisa chero ruzivo rwekukosha kwauri pane icho chigadzirwa kurongedza. Iwe unotora mutoro wekururama,
Usati washandisa chero chigadzirwa unofanirwa kusimbisa chero ruzivo rwekukosha kwauri pane chigadzirwa chigadzirwa. Iwe unotora mutoro wekururamisa, kukodzera uye kuvimbika kwechero ruzivo iwe rwaunopa www.tichamary.co.uk. sekufungisisa zvishoma nezvekuwana kwako webhusaiti ino uye nekushandisa zvirimo, unobvuma izvozvo www.tichamary.co.uk haina mutoro kwauri nenzira ipi neipi chero yesarudzo iwe yaunogona kutora kana zviito zvako kana zvisiri zviito zvinoenderana nezviri mukati. unobvumawo kuti huwandu hwechikwereti che www.tichamary.co.uk zvinobva kana zvine chekuita nekushandisa kwako uye kuwana kwako zvisinei nemhando yekuita kana kukumbira (semuenzaniso, kondirakiti, garandi, kutambudza, kuregeredza, mutoro wakakomba, hunyanzvi hwehunyanzvi, hunyengeri, kana zvimwe zvigadziko zvezvikumbiro), zvinogumira kumutengo wekutenga yezvinhu chero zvipi zvawakatenga kubva www.tichamary.co.uk mukutengesa kunoshanda.www.tichamary.co.uk hazvingambovi nemhosva chero ipi zvayo yakanangana, isina kunanga, yakakosha, ine njodzi, inokonzeresa, kana kukuvara kwechirango kunyangwe www.tichamary.co.uk akayambirwa nezve mukana wekukuvara kwakadai. Uku kuremerwa kwakazara kwechikwereti chinoshanda kune vese vanorasikirwa uye zvinokuvadza zvemhando ipi neipi. Kana iwe usina kugutsikana newebsite ino kana zvirimo (kusanganisira mazwi ekushandisa), mushonga wako wega ndewe kurega kushandisa ino webhusaiti. Nekuti mamwe masimba haatenderi kubviswa kana kuremerwa kwechikwereti chekukuvara kwakangoitika kana kwakakomba, kuderedzwa kwakadaro kunogona kusashanda kwauri.
ZVINOGONESESA ZVATINOPA ZVINOGONESERWA KUSHANDISA KWEMAHARA KUSHANDISWA CHETE.
Mukutenga chero cheizvi zvinhu, mutengi anobvuma kuti kune njodzi dzinowanikwa nekudyiwa kana kugoverwa kwezvinhu izvi. Aya makemikari HAAI kuitirwa kuti ashandise seyakawedzera chikafu, zvinodhaka, zvigadzirwa, makemikari epamba kana zvimwe zvinoshandiswa zvisina kukodzera Iko kunyorwa kwemashoko pane ino saiti hakuiti rezinesi kune ayo mashandisirwo mukutyora kwechero patent. Zvese zvigadzirwa zvinogadziriswa chete neanokwanisa uye vakarovedzwa zvakanaka nyanzvi. Vatengi vese vanomiririra uye vanobvumidza kuti kuburikidza nekuzviongorora kwavo uye kudzidza kuti ivo vanoziva zvizere uye vanoziva nezve zvinotevera: Mitemo yeHurumende maererano nekushandiswa uye kuratidzwa kune zvese zvigadzirwa. Hutano uye kuchengetedzwa njodzi zvine chekuita nekubata kwezvigadzirwa zvavanotenga. Iko kudikanwa kwekunyeverwa kwakaringana kwehutano uye njodzi njodzi dzakabatana nechero zvigadzirwa. www.tichamary.co.uk inochengetera kodzero yekuganhurira uye / kana kuramba kutengeswa kwezvigadzirwa kune chero vasina kukwana vanhu kana tiine chikonzero chekutenda kuti kushandiswa zvisizvo kuchaitika.
www.tichamary.co.uk zvigadzirwa zvinoitirwa chete kutsvagisa marabhoritari uye kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira hazvifanirwe kushandiswa kune chero zvinangwa, kusanganisira asi kusingaganhurwe kune vitro yekuongorora chinangwa, mune zvekudya zvinodhaka, zvigadzirwa zvekurapa, kana zvipoda zvevanhu kana mhuka kana zvekushambadzira. Mutengi anobvuma kuti zvigadzirwa hazvina kuomeswa kana kuyedzwa nazvo www.tichamary.co.uk yekuchengetedza uye kushanda mune zvekudya, zvinodhaka, zvekushandisa pakurapa, cosmetic, kushambadzira kana chero kumwe kushandiswa.
Mutengi anomiririra pachena uye anotendera kuti www.tichamary.co.uk iyo iyo mutengi ichaedza nemazvo, kushandisa, kugadzira uye kushambadzira chero zvigadzirwa zvakatengwa kubva www.tichamary.co.uk uye / kana zvigadzirwa zvakagadzirwa nezvigadzirwa zvakatengwa kubva www.tichamary.co.uk zvinoenderana nemaitiro emunhu akavimbika ane ruzivo mumunda uye nekuteerera kwakasimba kune ese anoshanda mitemo nemirau, izvozvi uye zvinotevera zvinomisikidzwa. Mutengi anoenderera mberi achibvumidza kuti chero chinhu chinogadzirwa nechinhu chero chipi zvacho hachifanirwe kushatiswa kana kushatiswa mukati mezvinoreva mutemo weFederal Food, Drug, uye cosmetic Act uye haizove zvinhu zvingangodaro, pasi peZvikamu 404, 505, kana 512 zveMutemo. , kupinzwa mukutengeserana kwepakati. Mutengi anoziva izvozvo, kubvira www.tichamary.co.uk zvigadzirwa zviripo, kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira, zvakagadzirirwa chete zvekutsvagisa, vanogona kunge vasiri pane Toxic Substances Control Act (TSCA) yekuverenga zvinyorwa. Mutengi anotora basa rekuvimbisa kuti zvigadzirwa zvakatengwa kubva www.tichamary.co.uk inobvumidzwa kushandiswa pasi peTSCA, kana zvichibvira.
Mutengi ane basa rekuona njodzi uye kuitisa chero kutsvagurudza kwakakosha kuti adzidze njodzi dzinobatanidzwa mukushandisa zvigadzirwa zvakatengwa kubva www.tichamary.co.uk. Hapana zvigadzirwa zvakatengwa kubva www.tichamary.co.uk , kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira, inotorwa sezvikafu, zvinodhaka, zvigadzirwa zvekurapa kana zvizoro. ZVESE zvigadzirwa uye masevhisi anopiwa ndezve RESEARCH ZVINANGWA CHETE. PASI PENYAYA mamiriro ezvinhu anofanira / chero CHIMWE chezvinhu izvi chishandiswa pakuvaraidza kana kudyiwa nevanhu. uye www.provenpeptides.com HAVANA mutoro wekumwe kukuvara kunogona kukonzerwa nekuregeredza, kushungurudzwa, kana CHINANGO chimwe chinhu chisingafanoonekwi.
Mukutenga zvigadzirwa izvi, mutengi anobvuma kuti kune njodzi dzinoenderana nekushandisa kwavo. Mutengi anomiririra uye anotipa mvumo kwatiri kuti kubva kune yevatengi yakazvimirira ongororo uye kudzidza ivo vanoziva zvizere uye vanoziva nezve:
(Ini). Hutano uye kuchengetedzeka njodzi zvine chekuita nekubata kwezvigadzirwa zvakatengwa;
(II). Maindasitiri ehutsanana anodzora anodiwa kuchengetedza vashandi vayo kubva kuhutano hwakadai nenjodzi dzekuchengetedza;
(III). Iko kudiwa kwekuyambira zvakakwana nezve hutano uye njodzi njodzi dzakabatana nezvigadzirwa; uye
(IV). Mitemo yehurumende, maererano nekushandiswa uye kuratidzwa kune izvo zvigadzirwa. Isu tinochengetera kodzero yekuganhurira kutengesa kwezvigadzirwa kana kusatengesa zvigadzirwa kune vasina kukodzera vatengi.
Chero mhinduro paemail kana kutumira maererano neyako / mhuka yangu uye kushandisa ini / ini / yangu / yangu uye iwe kana yako zvinoreva TISSUE SAMPLES uye bvunzo zvidzidzo. Mhinduro dzedu HAZVIREVE kushandiswa kwevanhu uyezve, usaite chero chinhu chisiri pamutemo nechinhu chero chiri pawebhusaiti ino.
Mutengi anopa mvumo yekuti vanobatana nerabhoritari, institution, yunivhesiti kana imwe nzvimbo-yekutsvagisa nzvimbo inobvumidza kutengwa uye kushandiswa kwezvigadzirwa zvinotengeswa ne www.tichamary.co.uk, yezvinangwa zvekutsvaga chete. Uyezve, chero munhu akatenga kubva www.tichamary.co.uk izvo zvisina kuti zvakabatana, ivo vachange vachiita chitsotsi chiito chavangatongwe nemhosva.www.tichamary.co.uk inochengetera kodzero yekuita nekushingairira kuongorora pamusoro peiyo ruzivo rwapihwa kutarisa kuti rukwane here. www.tichamary.co.uk pahungwaru hwahwo chete, zvingangoda imwe ongororo yekubatana isati yaitika kuzadzikiswa.
Aya maMitemo neMamiriro uye chero mazwi akasanganisirwa kana kutaurwa pano anoita chibvumirano chose pakati www.tichamary.co.uk uye iwe uine chekuita nekushandisa kwako ino Webhu saiti uye nenyaya iri pano, uye kusimudzira chero kunzwisisana kwepamberi kana zvibvumirano (kungave zvemagetsi, zvemuromo kana zvakanyorwa) zvine chekuita nenyaya, uye hazvigadziriswe kana kuchinjwa kunze kwekunyora, kana na www.tichamary.co.uk kuita zvigadziriso zvakadaro kana kugadzirisa maererano neiyi Mitemo uye Mamiriro Ekushandisa Chibvumirano.
Kana chero chikamu cheiyi Mitemo uye Mamiriro Ekushandisa Chibvumirano chikaonekwa kana kutsunga kusagundika, ipapo chikamu chakadai chinobviswa kana kugumirwa padanho padiki pazvinodiwa. Izvo zvakasara zveiyi Mitemo uye Mamiriro Ekushandisa Chibvumirano, kusanganisira chero chikamu chakavandudzwa, chichagara uye chichava chakazara kushanda. Iyi Mitemo uye Mamiriro Ekushandisa Chibvumirano ndicho chibvumirano chose pakati pedu chinotonga mashandisiro ako kweiyi Webhusaiti.
Misoro irimo mune iyi Mitemo uye Mamiriro Ekushandisa Chibvumirano uye neWebhu Saiti Yakavanzika Policy ndeyekureva chete.
www.tichamary.co.uk haizovi nemhosva yekunonoka kana kukundikana mukuita kunokonzerwa nemamiriro ezvinhu kupfuura kwazviri kudzora, kusanganisira, pasina muganho, kunonoka nekuda kwekuseri odha yezvigadzirwa zvakakumbirwa, kunonoka kwetsamba, kunonoka kwetsika kana kurasikirwa kwakatumirwa.www.tichamary.co.uk haazove nebasa rekuzivisa Mutengi kana paine kunonoka kwakadaro. Mutengi anova nebasa rega kuita dzimwe gadziriro dzekutenga zvimwe zvigadzirwa uye chero mutengo unowanikwa maererano nekutenga kwakadai.
Kunze kwekunge zvanyatsopihwa mune imwe "ziviso yepamutemo" pane ino Saiti, aya maMitemo neMamiriro zvinoumba chibvumirano chose pakati pako neSiti ino maererano nekushandisa Saiti ino, uye Zvemukati. Nekudzvanya "ndinobvuma" kana uchiisa odha yako, unobvumirana neyedu yekutumira uye Refunds Policy.
Isu tinopa ruzivo rwakanangana nekushandiswa kwevanhu se bhuku rinongedzera revanoongorora kuti vaongorore uye bvunzo dzekurabhoritari.
Pasina mamiriro ezvinhu zvigadzirwa izvi zvinotengeswa kuti zvishandiswe nevanhu, uye isu tinodzima chero maodha atingafungidzira nekushandisa nekuda kwechinangwa ichi.
Vatengi vese vanofanirwa kuona kuti chero makemikari akarairwa kubva kwatiri zviri pamutemo mukati menyika mavo.
UK Vatengi vanofanirwa kucherechedza kuti parizvino maSARMS haasi chinhu chinodzorwa pasi peiyo Kushandisa Zvisina Kufanira kweMutemo Wezvinodhaka 1971 or Psychoactive Substances Mutemo 2016
Ndokumbirawo musatengese chero zvinhu zvakatengwa mukati meino webhusaiti kuti zvishandiswe nevanhu, sezvo izvi zvingave zvisiri pamutemo pasi pe Mishonga Mutemo 1968
Isu hatigamuchire mutoro wezviitiko zvipi nezvipi zvine chekuita nekudyiwa kwevanhu, kwete kune: Kukuvara, kufa, kuremara, kumanikidzwa, kurasikirwa nemari
Iyi webhusaiti inoshandiswa ne www.tichamary.co.uk. Munzvimbo yese saiti, mazwi ekuti "isu", "isu" uye "edu" anoreva Sarms Store. Sarms Store inopa ino webhusaiti, kusanganisira ruzivo rwese, maturusi uye masevhisi anowanikwa kubva kuno saiti kwauri, mushandisi, wakagadziriswa pakubvuma kwako kwese mazwi, mamiriro, marongero uye zviziviso zvakataurwa pano.
Tinochengetedza kodzero yekuramba chero mararamiro aunoisa nesu. Isu tinogona, mukutangisa kwedu chete, tikwanise kugadzirisa kana kubvisa zvinhu zvakatengwa nemunhu, pamba kana nehutano. Iyi mitemo inogona kusanganisira mazano akaiswa kana pasi pekodha imwe chete yekambani, iyo imwe kadhi rechikwereti, uye / kana mirairo inoshandisa iyo imwechete yekubhadhara uye / kana kutumira kero. Muitiko apo tinoita shanduko kana kuraira kurongeka, tinogona kuedza kukuzivisa iwe nekutumira tsamba e-mail uye / kana nhare yekubhadhara / nhamba yefoni yakapiwa panguva yakarongwa urongwa. Tinochengetedza kodzero yekugadzirisa kana kurambidza mirairo iyo, mumutongo wedu oga, inoita seinoiswa nevatengesi, vatengesi kana vatengesi.
Unobvumirana kuti mazwi ako haazoputsi chero kodzero ipi zvayo yevamwe vatatu, kusanganisira copyright, trademark, mararamiro, unhu kana imwe kodzero yemunhu kana yekodzero. Iwe unobvumirana zvakare kuti mazwi ako haazove ane nhema kana zvimwe zvisiri pamutemo, zvinyoronyoro kana zvinonyadzisa, kana ane chero kombiyuta yekombiyuta kana imwe mwareji ayo anogona nenzira ipi zvayo kuchinja kushanda kweBasa kana chero webhusaiti yakabatana. Iwe haungashandisi kero yehetera ye-e-mail, unozvifananidza kuva mumwe munhu kunze kwewe iwe, kana kuti kutinyengedza isu kana mapato mapato maererano nekwakabva chero zvataurwa. Iwe unongotarisana chete nemashoko ose aunoita uye kunyora kwawo. Hatitori mutoro uye hatifungi nezvemhosva yezvinyorwa zvese zvakatumirwa newe kana ani zvake wechitatu.
Chero zvazvingaitika, Sarms Store, vatungamiriri vedu, maofficial, vashandi, vanobatana, vamiririri, makondirakiti, vadzidzi vepamba, vatengesi, vanopa masevhisi kana marezinesi vanova nemhosva yekukuvara, kurasikirwa, kudaira, kana chero yakanangana, isina kunangana, inoitika, yekuranga, yakakosha, kana zvinokuvadza zvinokanganisa zvemhando ipi neipi, kusanganisira, pasina muganho wakarasika purofiti, kurasikirwa nemari, kurasikirwa nemari, kurasikirwa kwedata, kutsiva mari, kana chero kukuvara kwakafanana, kungave kuri muchibvumirano, tort (kusanganisira kusaremekedza), mutoro wakasimba kana zvimwewo, zvinobva kushandisa kwako chero sevhisi kana chero zvigadzirwa zvakawanikwa uchishandisa sevhisi, kana kune chero chimwe chikumbiro chine chekuita neimwe nzira pakushandisa kwako sevhisi kana chero chigadzirwa, kusanganisira, asi hachingogumira kune, chero zvikanganiso kana kusiiwa mune chero zvirimo, kana chero kurasikirwa kana kukuvara kwerudzi rupi nerupi rwakakonzerwa nekuda kwekushandisa sevhisi kana chero zvemukati (kana chigadzirwa) zvakatumirwa, kutumirwa, kana neimwe nzira kuitiswa kuburikidza neshumiro, kunyangwe kana vakarairwa nezve kugona kwavo. Nekuti mamwe matunhu kana masimba haatenderi kubviswa kana kuremerwa kwechikwereti chekukuvara kwakakomba kana kwakangoitika, mumatunhu akadaro kana masimba, mutoro wedu unozogumira padanho rakakura rinotenderwa nemutemo.
Unobvuma kuregerera, kudzivirira nekubata Sarms Store isingakuvadzi uye mubereki wedu, vanobatsirana, vanobatana navo, vatinoshanda navo, maofficial, vatungamiriri, vamiririri, makondirakiti, vanopa marezinesi, vanopa masevhisi, vashandirapamwe, vanotengesa, vashandi nevashandi, vasingakuvadzi kubva kune chero chirevo kana kudiwa, kusanganisira mubhadharo wemagweta anonzwisisika, anoitwa nechero wechitatu-bato nekuda kwekukwira kana kutyora kwako kweMitemo yeBasa kana magwaro avanobatanidza nereferensi, kana kutyora kwako chero mutemo kana kodzero dzechitatu-bato.
Iyi Mitemo Yebasa uye zvibvumirano zvipi zvatipi zvatinokupa iwe Nheyo zvichakutungamirirwa nekugadziriswa maererano nemitemo yeUnited Kingdom.
Mibvunzo nezve iyo Terms of Service inofanira kutumirwa kwatiri ku sales@sarmsstore.co.uk